Sidee ayaan u qori karta A PS4 saakay Wixii Sharing Online
> Resource > Game > Sidee loo Diiwaan Video saakay On PS4
Sidaas aad maqlay dheer oo ku filan in PS4 ugu danbeeyay ee ay u qoraan kartaa kulan u ciyaaro ilaa ugu badnaan 15 daqiiqo. Ka dib markii in, waxaad fursad u haysataa in ay sidoo kale la wadaagno online ah ama waxaa laga baahin nool. Haddii aadan isku day ay taasi ka hor, oo aanad hubin sida loo sameeyo, si fudud igu dhex raaca, Xulashada 1: Iyada oo Button SHARE ama; Xulashada 2: Fursadaha Dheeraadka ah .
Duubo ee videos ama saakay aad loo sameeyo si joogto ah si toos ah halka aad u ciyaareyso. Waa ficil jaray-off doonaa laga bilaabo wakhtiga aad riix SHARE button iyo doonistiisa video clip ka kooban yahay gameplay ka dul iyo hore si ay u sameeyaan 15 daqiiqo ee guud ahaan.
Xulashada 1: Button SHARE ayaa
Xulashada 2: Fursadaha Dheeraadka ah
Hadda Waxaad si fudud u gali kartaa videos aad diiwaan (ie riwaayadaha ciyaarta) la click fudud ku PS4 ee DualShock 4 xukuma ee SHARE button. The SHARE button fadhiya midigta ku-bidixda ah ee kore ee xukuma sida wareegay ee shaashadda hoose. Ka dib markii in, waxaad geli doonaa interface Share ee sida ku cad Tallaabada 1.
Fiiro gaar ah : In si ay u beddelaan goobaha ka mid ah SHARE button aad ku xukuma, waxaad u baahan tahay si ay u helaan ka Settings Share ka interface Share ee.
Waxaad fursad u geliyaan aad PS4 duubay video gameplay ee u gal Facebook (Tallaabada 2) ama baahin waxa ay ku nool (Tallaabada 3) labada Ustream ama dhifasho. Nasiib darro, koombiyuutarka YouTube ee madal gal aan hadda taageeray. Si kastaba ha ahaatee, habkaani waxaa laga yaabaa in laga qaado tixgelin ama ku daray galay casriyaynta mustaqbalka.
2 geliyaan gal Facebook
Dooro Upload Video clip for uploading aad PS4 duubay video gameplay ee u gal Facebook. Ka dib markii in, ka dooro gaar video clip ah in aad rabto in aad la wadaagto. Ka dib markii in, ay doortaan in ay labada Edit ka hor la wadaago ama Guudmar aad video duubay. Si fudud Magaca aad video clip oo ka dibna ku qor in aad comment khaanadda bixiyo. Marka aad samaysay, riix Share !
3 Si Broadcast saakay
Waqtigan xaadirka ah, waxaad si fudud u baahin karaan gameplay PS4 NOOSHAHAY midkood on your Ustream ama dhifasho account (haddii aadan xisaab leedahay, si fudud raac tilmaan-screen on ay ku dhigay mid ka mid kor). Waxaad doonaa si loo hubiyo sanduuqa inay siin doonaa ogolaanshahaaga si PS4 hore. On top of in, sidoo kale waxaad ku dhejin kartaa xiriir ah in ay account FB haddii aad rabto. Haddii aad rabto in aad ka qayb qaataan wada hadal-waqtiga dhabta ah, waxaa jira fursad u ah ee soo bandhigeen aad comment on shaashad la mid noqoshada ee makarafoon. Just yar ah xusuusiyey in labada door bidaan waa ikhtiyaar.
Kale badan la wadaago aad PS4 duubay video gal Facebook, aad rabto in laga yaabo inaad la wadaagto aad ciyaarta ciyaarya gal dhufto ee kale, sida YouTube. Haddii taasi ay dhacdo, waxa aad u baahan doontaa in loogu badalo ama cadaadin aad hooyo PS4 ee diiwaan videos galay nooca file taasi socon for uploading gal YouTube ah. Waxaad u bedeli karaan degdegga internetka ama offline.
Waa hab dheeraad ah si toos ah oo toos ah si loogu badalo ama cadaadin files aad online. Si fudud u hubi haddii mid ka mid ah Converter online talinayaa ' s wanaagsan oo ku filan in aad u. Xawaaraha xoogga diinta ka duwan tahay sida ay internet-aad
Haddii kale, u tag iyada oo talooyin ku saabsan sida aad go'aan ka gaari kara on video ah Converter XAQA u video baahidaada. Inta badan waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo nooc file in ay si loogu badalo videos aad diiwaan sidaas in ay ku haboon YouTube ee koombiyuutarka awoodaan.
Sida loo Play MKV on PS3
Ku raaxayso phone on your computer
Top Awesome Android Games Waxaad u baahan tahay in la isku dayo